‘कामका हिसाबले संगठन सबैभन्दा अगाडि छ’ - GBM
‘कामका हिसाबले संगठन सबैभन्दा अगाडि छ’
नारायण प्रसाद भण्डारी भैरहवा क्षेत्रको जुझारु तथा लोकप्रिय युवा उद्यमीको नाम हो । बुद्धचोकमा इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायसहित अन्य विभिन्न फरकफरक क्षेत्रमा व्यवसायिक संलग्नता रहेका भण्डारी विगत पाँच वर्षदेखि उद्योग व्यापार संगठन, रुपन्देहीको अध्यक्षको रुपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा भएकोमा आजैदेखि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैछन् । वि.सं. २०३१ साल माघ १७ गते गुल्मी जिल्लाको साविक वस्तु गा.वि.स. १ (हाल धुर्कोट गाउँपालिका) मा तुल्सीराम भण्डारी र सरस्वती भण्डारीको कान्छो पुत्रको रुपमा जन्मेका भण्डारीले हिमालयन उच्च मा.वि. वस्तुबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षाको लागि रुपन्देही झरेपछि पारिवारिक र व्यवसायिक रुपमा सिद्धार्थनगरमा स्थापित भएका हुन् । लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तह, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक तह र आईबीएम कलेज बागबजारबाट ब्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तह पुरा गरेका भण्डारी हाल श्रीमती माया बस्याल, छोरा उत्सव र छोरी अंशिका भण्डारीका साथमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा बसोबास गर्दै आएका छन् । बुटवलमा जुस पसल, भैरहवामा होटल रेष्टुरेण्ट, चश्मा तथा मेडिसिन, स्टेशनरी लगायतका व्यवसाय हुँदै हालको इलेक्ट्रोनिक्स सामानको व्यापार तथा अन्य उद्योगहरुमा सफल रहनुभएका भण्डारी रोटरी क्लब अफ लुम्बिनी सिद्धार्थनगरको प्रेसिडेन्ट नोमिनी, भीम अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष लगायत सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै क्रियाशील छन् । स्पष्ट वक्ता, खरो स्वभाव खुल्ला हृदयका साथ व्यवसाय तथा समाजसेवामा सक्रिय भण्डारीसंग समसामयिक बिषयमा गौतमबुद्ध सन्देश दैनिकले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ः
उद्योग ब्यापार संगठन, रुपन्देहीको अध्यक्षको कार्यभारबाट बिदा लिदै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
म उद्योग व्यापार संगठनमा स्थापना कालदेखि नै सक्रिय रहँदै आएको छु । ५ वर्ष कार्यसमिति सदस्यमा, सह–कोषाध्यक्ष, सचिव, दुई कार्यकाल महासचिव र करिब पाँच वर्ष अध्यक्ष समेत गरी १४ वर्ष संगठनमा विभिन्न भूमिकामा सक्रिय रहें । सानो कोठाबाट सुरु गरेको संगठनलाई लोकप्रिय र स्थापित बनाउने, व्यवस्थित आफ्नै भवनमा कार्यालय बनाउने मेरो ठूलो अभिलाषा थियो, त्यो अहिले पुरा भएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा आफ्नै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको छ । कतिपयलाई लाग्न सक्छ, अध्यक्ष पद छाड्दा दुःख लाग्दो हो । तर, मलाई त्यस्तो केही महसुस भएको छैन । सफलतापूर्वक कार्यभार पुरा गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैछु । सन्तुष्ट र खुशी छु ।
तपाईं अध्यक्ष हुँदा संगठनले गरेका महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो संगठन यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुबीच लोकप्रिय संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । संगठनमा २ हजार ५ सय उद्योगी व्यवसायीहरुको आबद्धता रहेको छ । कोभिड –१९ महामारीका कारण यस पटक आधा व्यवसायीले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेको भए पनि हामीसंग आवद्ध सदस्यहरु अत्यन्तै धेरै हुनुहुन्छ । बुटवल, देवदह, तिलोत्तमा, लुम्बिनीमा संगठनका शाखाहरुको विस्तार भएको थियो । ती क्षेत्रका साथीहरुले राम्रो प्रगति गरेर स्वायत्त संस्थाको रुपमा अलग्गै विधान बनाएर क्रियाशील हुनुभएको छ । जिल्लाभर सञ्जाल फैलिएको, सरकारी, स्थानीय र अन्य क्षेत्रमा समेत प्रतिनिधित्व बढाउँदै स्थापित र पहुँच पु¥याउन सफल भएको, सडक खाना महोत्सव, औद्योगिक व्यापार मेला, अन्तरक्रिया, गोष्ठीमार्फत उद्योग, व्यापार, कृषि र पर्यटनको प्रबद्र्धन भएको छ । संगठनले स्थायी कार्यालयका लागि भवन बनाउन सरकारी जग्गाको खोजी गरेको भए पनि नपाएका कारण कोरोनाकालमै जग्गा खरिद गरी ११ महिनाको अवधिमा भवन तयार गरी छोटो समयमै आफ्नै भवनमा कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएका छौं । मेरो कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धि यिनै हुन् ।
आफ्नो पछिल्लो कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
मैले अघि नै भनिसके कि के कस्ता कामहरु गर्न सक्यौं भनेर । संगठनको नेतृत्व गर्दा यी सफलता प्राप्ति गर्न ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो । विशेष गरी जग्गा प्राप्तिमा ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको विषय तपाईंहरु सबैलाई थाहै छ । जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेपछि संगठनको नाममा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित उदयपुरमा २ कठ्ठा १० धुर जग्गा खरिद ग¥यौं । कोभिड महामारीले थिचिएका उद्यमी, व्यवसायीसँग सहयोगी हात फैलाउँदै ठूलो कठिनाईका बाबजुद बाधा, व्यवधान र अड्चनहरुलाई छिचोल्दै अघि बढियो र आफ्नै जग्गाामा भवन बनाउन सफल भयौं । यसमा मेरो नेतृत्वमा कार्यसमितिका साथीहरु, उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायत समाजका सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । यसले मलाई के पाठ सिकाएको छ भने इमान्दारिता र दृढतापूर्वक लाग्ने हो भने विषम परिस्थितिलाई पनि अनुकुल बनाउन सकिदो रहेछ ।
तपाईंले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै गर्दा मनमा गर्छु भन्ने लागेको तर पूरा हुन नसकेका केही योजनाहरु छन कि ?
खासमा मलाई पढेलेखेका तर जागिर नपाएका वा के गर्ने भनेर मेसो नपाएका युवा जमातलाई उद्यमी बनाउने ठूलो रहर छ । त्यसका लागि हामीले औद्योगिक व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव ग¥यौं । हामीले गरेको महोत्सव यस क्षेत्रकै उत्कृष्ट रहेको साक्षी तपाईहरु नै हुनुहुन्छ । युवाहरुलाई उद्यमी व्यवसायी बनाउने मेरो रहरलाई कोरोना महामारीले डिष्टर्ब ग¥यो । उद्यमशीलता तालिम, औद्योगिक मेशिनरी तथा परामर्श सुविधा स्वदेशमै उपलब्ध गराएर स–सानो पूँजीबाट सुरु गरिने उद्योहरुमा युवाहरुलाई सहभागि गराउनका लागि विशेष खालको उद्योग मेला गराउन मन लागेको थियो । विदेशी परामर्शदाता तथा मेशिनरी उपकरण निर्माताहरुसंग यस विषयमा छलफल पनि भएको थियो । कोरोनाले गर्दा उनीहरुलाई ल्याउन र उद्यमशीलता महोत्सव गर्न सकिएन । धेरै भन्दा धेरै युवालाई व्यवसायमा संलग्नता गराउन सकियो भने त्यसले बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने, उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउन सकिने मेरो विश्वास छ ।
निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा पनि त गर्न सकिएला नि ?
हो, ठीक भन्नु भो । हाम्रो संगठनको विधानमा निवर्तमान अध्यक्षको हैसियत अध्यक्षपछि र वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्दा माथिको पद हो । जसले गर्दा संगठनका हरेक बैठकहरु वा कार्यक्रमहरुमा मेरो स्वभाविक रुपमा क्रियाशीलता रहन्छ । अर्कोतिर निकै दुःख, कष्ट, मिहिनेत र पसिना बगाएर स्थापना गरेको संगठनको एक सिपाहीको हैसियतले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक, व्यवसायिक क्षेत्र बनाउन तथा जोश जाँगर भएका युवाहरुलाई व्यवसायमा संलग्न गराउन आगामी दिनमा पनि मेरो पहल जारी रहने छ ।
डेढ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो कोरोना कहर सुरु भएको । यसबीचमा व्यवसायीहरु त्यसै मर्कामा परेको अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा जग्गा खरिद तथा भवन निर्माणमा कसरी सहयोग जुटाउन सक्नुभयो ?
सानो कोठामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा नै आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन बनाउने तीव्र अभिलाषा थियो । त्यही भएर हामीले सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिरहेका थियौं । जग्गा उपलब्ध भयो भने भवन त जसोतसो बनाइहालिन्छ भन्ने लागेको थियो । भवन निर्माणस्थल भनेर बोर्ड समेत राखेर जग्गा प्राप्तिका लागि गरिएका पहलहरु असफल भएपछि गत वर्ष अर्थात २०७७ असारमा लकडाउन केही खुकुलो भएको मौका पारेर जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु ग¥यौं । साढे २ कठ्ठा जग्गा खरिद गर्दा करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले जसरी पनि व्यवस्थापन गरौं भनेर मैले साथीहरुसँग जोडबल गरें । संगठनमा करिब ४० लाखको कोष थियो, त्यसलाई प्रयोग गरौं र बाँकी नपुग पैसा उठाऔं भनेर साथीहरुलाई अनुरोध गरेपछि पुरै टीम कटिबद्ध भएर लाग्यो । कार्यसमितिका साथीहरु, सल्लाहकार, परामर्श समिति, उपसमितिहरुमा रहेका साथीहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा पैसा उठाउन सहयोग गर्नुभयो । जग्गा पास गर्नासाथ नक्सा बनाएर भवन निर्माण कार्य पनि शुभारम्भ गरियो । ११ महिनाअघि तत्कालिन कृषिमन्त्री तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय घनश्याम भुसालले भवन निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको हो । उद्योगी, व्यवसायी लगायत सबैसंग सहयोगको आव्हान ग¥यौं । माननीय सांसद घनश्याम भुसालले सांसद विकास कोषबाट २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले सिद्धार्थनगर नगरपालिकामार्फत ४० लाख रुपैयाँ सहयोग ग¥यो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय पालिकामार्फत १८ लाख सहयोग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने रकम प्राप्तिका लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिकासंग सम्झौता भइसकेको छ । हाम्रा शुभचिन्तक उद्योगी, ब्यवसायीहरुले पनि नगद तथा जिन्सी सहयोग गर्नुभएको छ ।
संगठन जस्तै प्रकृतिका अन्य व्यवसायिक संघ संस्थाहरु पनि छन्, उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा पनि होला नि ?
नाइ नाइ, विल्कुल प्रतिष्पर्धा छैन, मित्रवत व्यवहार छ । उद्देश्य मिल्ने व्यवसायिक संघ–संगठनहरुमा हामी कामका हिसाबले, मुद्वाका हिसाबले हामी अग्रस्थानमा र लोकप्रिय छौं । त्यसैले बरु अरु संस्थाहरुले हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न खोज्नुभएको थियो विगतमा । तर, मेरो नेतृत्वको संगठनले उद्यमी व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याहरु उठाउने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र कार्यक्रमहरु गर्ने काम ग¥यौं । जसले गर्दा प्रतिष्पर्धा गर्न खोज्नेहरु पनि सहकार्यको लागि तयार हुन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आयो । सबै क्षेत्रमा स्थानीय तह होस् वा अन्य सरकारी निकायहरुमा हाम्रो उपस्थिति, समन्वय र समझदारी उच्चस्तरको छ, प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका छौं ।
प्रसंग बदलौं, कोभिड–१९ महामारीको जोखिम अझै कायमै छ । यसबीचको डेढ बर्षको अवधिमा दुईपटक लकडाउन भयो र कतिपय व्यवसाय अझै बन्द अवस्थामा छन् । उद्योगी व्यवसायीलाई असर कस्तो छ ?
कोभिड–१९ को असर उद्योग व्यवसायमा निकै छ । सबैभन्दा मर्कामा त पर्यटन उद्योग परेको छ । विगतमा सशस्त्र द्धन्द्ध वा भूकम्पले भन्दा बढी असर कोरोनाले पारेको छ । कतिपय व्यवसाय त ड्यामेज नै हुने स्थिति छ । व्यवसायीहरु पूँजीगत नोक्सानीमा छन् । पूँजीगत नोक्सानी भन्नाले व्यवसाय विस्तारका लागि होइन, थेग्नका लागि पूँजी थप्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात ऋणमाथि ऋण थपेर व्यवसायीले बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब र घर खर्च चलाइरहेका छन् । यो असरको पूर्ति हुन व्यवसाय पूर्ण रुपमा खुलेपछिको दुई–तीन वर्ष लाग्छ । कोभिड–१९ पूर्ण नियन्त्रण नहुँदासम्म व्यवसायमा परेको असर कायमै रहनेछ । तसर्थ हामीले कोभिड–१९ बाट पीडित व्यवसायीका लागि लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा, पूँजीगत नोक्सानीमा रहेका व्यवसायीलाई राहत प्याकेज र पीडित व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं ।
रुपन्देही देशकै उत्कृष्ट व्यवसायिक हब बन्दै गइरहेको छ । यहाँ कस्तो सम्भावना छ व्यवसायीका लागि ?
हो, रुपन्देही काठमाण्डौंपछिको पहिलो आर्थिक चलायमान शहर बनिरहेको छ । भारतसंगको व्यवस्थित भन्सार नाका, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रदेशकै पहिलो मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र हामीकहाँ उपलब्ध छ । शान्तिका अग्रदुत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको छ । भारतसंग सुगम र सहज नाका भएका कारणले आयात निर्यातमा व्यवसायीलाई सजिलो छ । जसले गर्दा ठूला व्यवसायिक घराना र अन्य व्यवसायीहरु यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न इच्छुक देखिएका छन् । भारत वा तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सामानहरु बोर्डरबाट सिधै उद्योगमै वा गोदाममै अनलोड गर्न सकिने अवस्था छ यहाँ । पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारणले तारे होटलहरु बनिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले, सडक संजालका हिसाबले, शान्ति सुरक्षा र व्यवसायिक वातावरण भएका हिसाबले यस क्षेत्रमा नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुने, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल्ने, पर्यटन क्षेत्रसंग सम्बन्धित उद्योगहरु बन्ने क्रम बढिरहेको छ । यहाँको यस्तो वातावरण कायमै राखेर नयाँ उद्यमीलाई अझै बढी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई छिटो बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
सम्भावनासँगै चुनौतिहरु पनि त होलान् नि ?
रुपन्देहीमा व्यवसायिक वातावरण उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि चुनौतिहरु पनि प्रशस्तै छन् । पछिल्लो समय जग्गाको भाउ निकै उच्च भएको छ, जसले गर्दा जग्गा खरिद गरी उद्योग लगाउन नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । उद्योग खोल्न जग्गाकै समस्या हुने अवस्था छ । अर्कोतिर १३२ केभिए प्रसारणलाईन छैन । जसले गर्दा धेरै विद्युत खपत हुने ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिंदैन । हामीले १३२ केभिए प्रसारणलाईन बनाउन माग गरिरहेका छौं । उद्योग सुरु भएपछि त्यसको वरिपरी वस्ती विकास हुने र पछि वातावरणका विषय उठाएर उद्योगलाई नै विस्थापित गराउने प्रवृत्ति पनि उद्योगीले भोग्ने समस्या हुन् । हामीकहाँ नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गर्न कर लगायत अन्य सहुलियत दिइदैन । यसमा सरकारले सोंच्नैपर्छ । बैंक ब्याज महंगो छ । अस्थिर छ वित्तीय क्षेत्र । ब्याजदरको स्थायित्व छैन । ३ देखि ५ प्रतिशतको आसपासमा उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने अवस्था सृजना हुनुपर्छ । यसले औद्योगिक वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ । बैंक ब्याज सस्तो भए उद्योगमा लगानी ओइरिन्छ । ब्याजकै कारण लगानी अनुसारको प्रतिफल नहुने अवस्था छ अहिले । राजनीतिक अस्थिरता, दैवी प्रकोप वा आकस्मिक विपत्ती, सहज बजार व्यवस्थापन नहुनु लगायतका चुनौति पनि भोग्दै आएका छौं ।
तपाईं संगठनको नेतृत्वमा पनि सफल हुनुभो, व्यवसायिक रुपमा पनि सफल व्यवसायीको पहिचान बनाउनु भएको छ । कसरी सफल हुनु भो ?
दत्तचित्त भएर लागेपछि सफल भइदो रहेछ । मेरो पढाइ पनि व्यवस्थापन नै हो । कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भन्दा अगाडि त्यसको सम्भावना र अवसरका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि त्यसको कुशल व्यवस्थापनलाई जोड दिनुपर्छ । समयको व्यवस्थापन, अनुशासन, आर्थिक व्यवस्थापन सबै कुरा मिलेपछि सफलता पाइन्छ ।
कुन कुन व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ ?
इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय गरिरहेको छु । पञ्चमहालक्ष्मी ग्याँस उद्योगमा पनि आबद्ध छु । रियलस्टेट ब्यवसायमा पनि लागें । साथीहरुसंग सहकार्य गरेर काम गर्न सकिने सम्भावना छन् । संगठनको नेतृत्वमा रहँदा थप व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि ध्यान दिन सकिएन । पछिल्लो समयमा कोभिड असरले पनि मार पा¥यो ।
अन्त्यमा तपाईंले भन्नैपर्ने केही छन् कि ?
मेरो नेतृत्वमा रहेको उद्योग व्यापार संगठन, रुपन्देहीलाई अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न मेरो कार्यसमितिमा रहेका व्यवसायी साथीहरु, सल्लाहकार समिति, परामर्श समिति, राजनीतिक दलका नेताहरु, संघ–संस्था, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी मित्रहरु, सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, सुरक्षाकर्मी लगायत समस्त उद्यमी व्यवसायी तथा शुभचिन्तक सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । संगठनलाई समस्त उद्यमी व्यवसायीको साझा, समावेशी र लोकप्रिय संस्था बनाउन लागि परौं यही अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
← आजको गौतमबुद्ध सन्देश दैनिकको पढ्नुहोस् । २०७८ असोज ९ गते शनिबार
सम्पादकीय ः व्यवसायिक पहिचान →
ब्याजदर घटाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
लागुऔषध विरुद्ध जुट्यो बेलहिया